06 | August | 2017 | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
မိတ္ထီလာ ရမည်းသင်း သာကေတဘာသာရေးပြသနာများဦးဆောင်သူ တောင်သာလေးကို ထိထိရောက်ရောက်အရေး မယူလျင် ပြသနာမီးထိုးသလိုဖြစ်လာမည်
Soe Min added4new photos.
မိတ္ထီလာ ရမည်းသင်း သာကေတဘာသာရေးပြသနာများဦးဆောင်သူ
တောင်သာလေးကို ထိထိရောက်ရောက်အရေး မယူလျင် ပြသနာမီးထိုးသလိုဖြစ်လာမည်။
The master-mind puppet master’s black-hands pulling the strings exposed
အရှင် ပညိဿရာ လင်္ကာရ added7new photos.
August4at 9:35am ·
မန္တလေးဘုရားကြီးအနောက်မုခ်သာသနာ၂၅၀၀ ဗိမာန်တော်အတွင်းရှိသပိတ်စခန်းကိုလာရောက်ပြီးဆွမ်းလာကပ်တဲ့ ထောက်ပံ့တဲ့အဖွဲ့တွေထဲမှာတပ်မတော်ထောက်လှမ်းရေးဟောင်း
လက်ရှိ မြန်မာ ပြည်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ မဘသနဲ့၉၆၉ အခြေခံ လူမျိူးရေး ဘာသာရေး ပြသနာ တွေဟာလည်း တရုတ် ကွန်မြူပါတီ လက်ဝေခံ တရုတ် ခရိုနီ တွေရဲ့ လက်ချက် ဘဲဖြစ်ပါတယ်
August 6, 2017 August 6, 2017 drkokogyi
မြန်မာ ပြည်ရဲ့ မူဆလင်အသိုင်းအ၀ိုင်း အများစု ဟာ လွတ်လပ်ရေး
တိုက်ပွဲ မှ သည် အာဏာရှင် တော် လှန် ရေး တိုက်ပွဲ တွေ အထိ ပါဝင်ခဲ့ 
ကြလို့ မြန်မာ စစ်အာဏာရှင်တို့ ရဲ့ အငြိုးထားမှု ကို အယင်ကတည်းက ခံ
ခဲ့ကြရ ပြီး ပါပြီ။ ဒါကြောင့် လဲလက်ရှိ မြန်မာ အစိုးရကိုအကြပ်အတည်း
တွေ့ စေမယ့် လူမျိူးရေးဘာသာရေး အဓိဂရုဏ်းေ တွေ မှာ မူဆလင် အသိုင်းအ၀ိုင်းဟာ နိုင်ငံရေး ဓားစာခံအဖြစ် အသုံးချ ခံနေရတာပါ။ ဒါဟာ
လည်း စစ်အုပ်စုနဲ့ တရုတ် ကွန် မြူ လက်ဝေခံတို့ ရဲ့ နိုင်ငံေ၇းယုတ်မာ မှု
လက်ရှိ မြန်မာ ပြည်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ မဘသနဲ့၉၆၉ အခြေခံ လူမျိူးရေး
ဘာသာရေး ပြသနာ တွေဟာလည်း တရုတ် ကွန်မြူပါတီ လက်ဝေခံ တရုတ် ခရိုနီ တွေရဲ့ လက်ချက် ဘဲဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ အားဖြင့် INDIA နဲ့ ပါကစ်စတန် နိုင်ငံတို့ ရဲ့ ဘာသာရေးလူမျိုးရေး ပြသနာ ပိုမို့ ကြီးထွားလာ
အောင်တရုတ်ကွန် မြူနစ် အုပ်စု ကဆောင်ရွက် နေသလို မျိူးပါဘဲ။ မြန်မာပြည်မှာကတော့ တရုတ် ကွန်မြူ နစ်အုပ်စု ကို မြန်မာစစ်အုပ်စုက အဖေ တော်ထားတော့ တိုင်းပြည် ကို တရုတ် သြဇာကလွတ်အောင်လုပ်ပြီးတည်ထောင် ဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်။
နောက် တရုတ် ကွန်မြူ နစ် အစိုးရ က တရုတ်လူမျိူးတွေကို အာဆီယံဒေ ( အထူးသဖြင့် မြန်မာနဲ့လာအို ) နဲ့ အာဖရိက ဒေသကို ပြောင်းရွှေ့ အခြေချ နေထိုင်ဖို့ အလွန်အမင်းတိုက်တွန်းနေပါတယ်။ ဒါကလည်း တရုတ်ကွန်မြူ နစ် ပါတီ တိဗက်ဒေသနဲ့ ရှင်ကျန် ဒေသမှာ လူမျိုးရေး အခြေချ ကိုလိုနီပြု ပြီး လူမျိူးေ၇းပြသနာဖန် တီးကာ တရုတ် အစိုးရရဲ့သြဇာ ချဲ့ ထွင်ရေး ဖန်တီးနေတဲ့ ပုံ စံနဲ့ အလားတူဘဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံသို့ ပေးစာက မွတ်စလင်တွေရဲ့ ၀တ်ပြုဆုတောင်းမှု့တွေကို တားမြစ်ဖို့ ဥပဒေတွေကို လိုရာဆွဲ အသုံးပြုနေတယ်လို့ မီးမောင်းထိုးဖော်ပြ
Ye K Htwe with Kyaw Win.
ဘာသာရေးနှင့် လူ့အခွင့်ရေးအဖွဲ့စည်းပေါင်း နှစ်ဆယ်က မွတ်စလင်တွေကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ သူတို့ရဲ့ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်မှု့တွေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုရန်အတွက် သူတို့ရဲ့ အခွင့်ရေးတွေကို အကာကွယ် ပေးပါရန် တောင်းဆိုတဲ့ စာတစ်စောင်ကို နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံသို့ ပေးစာတစ်စောင် ကို ပေးပို့လိုက်ပါတယ်။